IBC2015 @ Cinegy! | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာ Delivery » Cinegy @IBC2015!
အဆိုပါ Cinegy အသင်းကိုသင်မှာဖြစ်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်လျှင်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ကြောင်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်များတစ်ကြီးထွားလာစာရင်းရှိပါတယ် IBC2015! သောကြာနေ့ကရာအရပ်ကိုယူဒီနှစ် IBC2015 မှာ Cinegy မိတ်ဖက်ရှင်းလင်းနှင့်အတူစတင်ခြင်း 11th အဆိုပါ Cinegy မှာ 10.45am မှာစက်တင်ဘာလ 7.A30 ရပ်တယ်။ အဆိုပါ Cinegy Partner ရှင်းလင်းအသစ်သည်အဘယ်အရာကိုခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်တကွသင်ပေးသွားမှာပါ Cinegy @IBC 2015။ သင်ဤတက်ရောက်ရန်လိုပါကအီးမေးလ်ပို့ပါ [အီးမေးလျ protected]
IBC 2015 @ Cinegy ရဲ့ "Software ကိုသတ်မှတ်ထားသောရုပ်မြင်သံကြား" ပြဇာတ်ရုံ ကနေစတင်ပါလိမ့်မည် 9.30am နေ့စဉ်, Cinegy မီးမောင်းထိုးပြရပ်တည်ချက် 30.A7 အပေါ်အလုပ်ချိန်နာရီ 30 မိနစ်တင်ပြချက်များကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် Software ကိုသတ်မှတ်ထားသောရုပ်မြင်သံကြား။ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲလကျထကျကျြောဖြစ်သကဲ့သို့, ကို virtual စက်တွေအတွက်သို့မဟုတ်မိုဃ်းတိမ်၌, ကုန်စည်အိုင်တီပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်အပြေးစံချိန်စံညွှန်းမီဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်လွှင့်ယနေ့ကလုပ်နေတာဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Cinegy ရဲ့ "Software ကိုသတ်မှတ်ထားသောရုပ်မြင်သံကြား" တင်ပြချက်များကိုသင် software ကိုအခြေခံသည့်ဖြေရှင်းချက်မှရွေ့လျား၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုနားလည်သဘောပေါက်ကူညီပေးပါမည်။ အပြည့်အဝအချိန်ဇယားကိုကြည့်ရှုရန်, နှိပျပါ ဤနေရာတွင်!
လှုပ်ရှားမှုပြဇာတ်ရုံထဲမှာ IBC အကြောင်းအရာနေရာတိုင်းမှာနည်းပညာ တက်ရောက်လာကစက်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံးရှုထောင့်ဖြတ်အဖြစ်အရေးယူအတွက်နည်းပညာကိုကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း, တိမ်တိုက်, အိုင်ပီ, ထုတ်လုပ်မှု, Post ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေ၏ themes များဖုံးအုပ်အခမဲ့-to-တက်ရောက်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တစ်ခုစီးရီးထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။ သောကြာနေ့ 11 တွင်th ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ 2.00pm Cinegy ရဲ့ဦးခေါင်း, Lewis က Kirkaldie မှာစက်တင်ဘာလ, "မီဒီယာတစ်ခုချန့်စနှင့်အတူတိမ်ထူ" ခန်းမ3နှင့်ပစ္စုပ္ပန်အတွက်လှုပ်ရှားမှုပြဇာတ်ရုံထဲမှာနည်းပညာအတွက်စင်မြင့်မှယူပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတင်ဆက်မှု "မိုဃ်းတိမ်သည်" အမှန်တကယ်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ကိုဆိုလိုသည်နှင့်မည်သို့သောဤနည်းပညာအပြောင်းအလဲများနေဆဲလုံခြုံ, ထိရောက်သောပေးနိုငျသောအရာကို demystify ဖို့ကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူတစ်ဦးရဲ့ IP နဲ့ cloud based စက်ရုံပြောင်းရွှေ့နှငျ့ရငျဆိုငျစိန်ခေါ်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြတော်မူလိမ့်မည်ဘီဘီစီ ni အားဖြင့်မိတ်ဆက်လိမ့်မည် နှင့်ထုတ်လွှင့်-အင်ဂျင်နီယာဆော့ဖ်ဝဲ၏အစဉ်အလာရှေးရိုးစွဲကမ်ဘာပျေါတှငျအကျိုးရှိသောဖြန့်ကျက်။ Kirkaldie ထို့နောက် Cinegy လက်ရှိထုတ်လွှင့်နောက်ဆုံးပေါ်မိုဃ်းတိမ်ကိုနည်းပညာနှင့်အတူ Cinegy R & D ဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးသောအရာကိုတစ်ဦးလြှို့ဝှကျထှကျသှား peek အပါအဝင်, ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမီးမောင်းထိုးပြအပေါ်ကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။
"ဒီတင်ပြချက်သူတို့ကြိုတင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေတစ်ထုတ်လွှင့်မယ့်မြင်ကွင်းကိုအတူပရိသတ်ကိုပေးတပ်ဆင်ခ post နှင့်မည်သို့မိုဃ်းတိမ်နှင့် IP based အခြေခံအဆောက်အအုံသူတို့ထုတ်လွှင့်လမ်းကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြလိမ့်မည်" Kirkaldie ကပြောပါတယ်။
နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟာ HTTP နှင့်ဝက်ဘ်ပရိုတိုကောများနှင့်အောင်းနေချိန်၏အနည်းငယ်ဘောင်နှင့်အတူတစ်ဦးစံ HTML2 browser ကို HTTP ကိုသို့မဟုတ် WebSockets ကျော် MPEG2 TS ပေးပို့ဖို့အမေဇုံ EC5 Air လေကြောင်းလိုင်း၏အသုံးပြုမှုကိုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ရပ်: Cinegy လက်ဆောင် IBC @ တဏှာ Deluxe ကပူးတွဲကမကထ, တဏှာခေါင်းစဉ် DJ သမားရဲ့ Dimitri Kneppers နှင့်တိပ် DJ သမားရဲ့ featuring ယခုနှစ် IBC2015 ပြင်ပအကြီးမားဆုံးပါတီတစျခုဖွစျလိမျ့မညျ။ တနင်္ဂနွေအမ်စတာဒမ်အတွက်ကျော်ကြား Melkweg ကလပ်မှာအရပျကိုယူပြီး 13th စက်တင်ဘာလ, တဏှာတစ်ခုဖိတ်ကြားချက်ကိုသာဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပြီးသားတက်ရောက်ရန် RSVP'd မဟုတ်ကြလျှင်, သင်၏အထူးသီးသန့်လက်မှတ်ယခုလျှောက်ထားကျေးဇူးပြုပြီး ဤနေရာတွင်!
Cinegy အိုင်ပီ Tools များအပါအဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်လွှမ်းခြုံ, ဆန်းသစ်ဗီဒီယို, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုး, သုံးစွဲ, ပလေးအောက်ကိုမှတည်းဖြတ်, အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူတက်ကြွစွာ archive ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးအားလုံး။
စံအိုင်တီ Hardware နဲ့ Non-စီးပွားဖြစ်သိုလှောင်မှုနည်းပညာအပေါ်အခြေခံပြီး, Cinegy ထုတ်ကုန်အလွယ်တကူ Deployable နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောတတ်နိုင်, အရွယ်မှာဖြစ်ကြသည်။
မိုဃ်းတိမ်ကို Multi-Channel ကိုပလေးအောက်
လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှု & Archive
သတင်း, စတူဒီယို & တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု
4K ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-08-31
ယခင်: #IBC2015 မှာ RF ဖြန့်ဖြူးအတွက်နည်းပညာသစ်များတခုအဖြစ်မှ ETL စနစ်များ
နောက်တစ်ခု: Anton / Bauer ဟာ 2015 IBC Show မှာနယူး Cine ဘက်ထရီစီးရီးကြေညာ